Deni oo soo bandhigay macluumaad aan horay loo 'maqal' oo uu kala
Deni oo soo bandhigay macluumaad aan horay loo ‘maqal’ oo uu kala
Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland oo caawa Bulshada Puntland kala hadlay marxaladaha siyaasadeed ee hadda taagan ayaa soo bandhigay macluumaad aan horay loo maqal oo uu sheegay in uu dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mudo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu halka u dhigay.
Deni ayaa sheegay in afartii sano ee la soo dhaafay ay Dowladda Soomaaliya ay qaarka ka mid ah deeq-bixiyeyaasha caalamka “ku qancisay” in laga guuro nidaamka federaalka lana xoojiyo xukuumadda dhexe iskuna dayday in ay ciidamadda ku dhisto qaab ka duwan hanaanka lagu heshiiyey.
Ololaha qabashada doorasho qof iyo codka ahaa ee madaxweyne Farmaajo ayuu ku tilmaamay “in uu ahaa qorshe marin-habaabin ah oo la doonayey in dhaqaale looga uruursado dalalka taageera dimuqraadiyada”.
Hogaamiyayaasha hada ka ariminaya Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayuu ka dhawaajiyey in ay ku yimaadeen doorasho uu dhiig ku daatay isaga oo sheegay in isbedel lagu sameyso hogaanka Jubaland ay dowladda dhexe u adeegsatay “ciidan aan Somaali ahayn balse markii uu ka fashilmay qorshahaas ay go’aansatay in ay kala qeybsato Jubaland una adeegsato ciidamadda hada la geeyay Gedo”.
“Ciidamada Gorgor Haramacad ee la sheego waxa ay ka dagaalameen Dhuusamareeb, Gedo iyo Daljirka daahsoon, lamana tagi karo Huriwaa iyo Afgooye” ayuu iswaydiiyay Siciid Deni.
Hogaamiyaha Soomaaliya ee mudo xileedkiisu dhamaaday ayuu ku eedeeyay in uu ka xumaaday kulan ay hogaamiyayaasha Jubbaland iyo Puntland la qaateen siyaasiyiinta iyo dhaqanka beellaha dega magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay.
“Maxaa dhacay Waa la gaaray 8Febaury aaway darbiyadii laga soo daadanayay” ayuu i weydiiyay ayaa laga soo xigtay Hogaamiye Deni.
“Dowladdan waxa ay aad u isticmaashaa meesha ay dadka Soomaaliyeed ka liitaan oo ay xoq-xoqdaa qabyaaladda” ayuu yiri isaga oo halkiisa raaciyay “Farmaajo mar walba Muqdisho u diidaa in lagu shiro waa meel ay wada joogaan dadka ay qadiyaddan khuseyso”.
“[Farmaajo] habeen hore ayuu i soo wacay ’17-kii September ma aanan ogolaadeen markii aad i tiri waan ku dhisayaa ayaan ogolaadey’ ayuu igu yiri Khudbadiisa baarlamaanka wuxuu yiri ‘Saciid baa qor-qortey’ waa nasiib-darro kal Isaga oo moodaya in aan dhisi doono ayuu ila wadaagay xogo ay kamid tahay ciidan iyo lacag baa ii diyaarsan,”ayuu ku dooday hoggaamiyaha Puntland
“Dalka iyo dadka la rabo in la xaliyo, Garbahaarey ayaa xalin waayey,” ayuu yiri isaga oo ku eedeynaya dowladda Farmaajo in ay dhistay ciidamo daacad u ah kuwaas oo aan beegsan Al –Shabaab.
Ciidamadaas oo Turkiga uu tababaray oo kala ah Gorgor iyo Haramcad waxay ka amar-qaataa Villa Soomaaliya waxaana Siciid Deni hoosta ka xariiqay “in uu dhisayo nidama kelitalis ah”.
“Ma Al-Shabaab ayaa ka baqnaa mise Villa Soomaaliya ayaan ka baqnaa maxaa yeelay waxyaabaha la adeegsanayo wax farqi ah uma dhaxeeyo. Maalin walba khatar ayaan ku jirnaa” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Kulanka oo ay ka qeybgalayaan Guddoomiyaha Ku-xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan, Goleyaasha maamulka, Masuuliyiin hore iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada ayaa waxaa lagu qabtay xarunta PDRC tolk ee magaaladda Garoowe.
Xaqiiqda, Diiwaanada, Xiddiga Goobta,
Erayadii Luukos qiyaas ahaan